Izindaba - Vula Imakethe yeRussia Far East
Ngo-Agasti 2020, iqoqo lokuqala likabhiya weBlack Beauty lalethwa ngempumelelo emakethe yaseRussia Far Eastern. Njengophawu lobhiya oludumile lweJINBOSHI brewery, kungokokuqala ukuthi ubhiya iBlack Beauty ingene emakethe yaseRussia.
Eminyakeni yakamuva, isidingo sikabhiya osezingeni eliphakeme siyakhula eRussia. Okwamanje, iChina sekuyisikhathi eside ikhuthaza ukuhwebelana kwezomnotho neRussia Far East.
"Umngani ovela eChina wangiphoqa ukuthi ngiqale ukucabanga ngokungenisa ubhiya eRussia", kusho uStephen Loginov, ongenisa ubhiya eBlack Beauty. "Abantu abaningi lapha bakhala ngokuthi abutholakali ubhiya osezingeni eliphezulu kuleli, futhi bebezimisele ngokufunda izindlela zokupheka kwamanye amazwe".
Ekugcineni, uVictor wathinta iJINBOSHI futhi wathola isimemo sokuvakashela indawo okwenziwa kuyo utshwala. NgoNovemba odlule, ngemuva kokuvakashela iJINBOSHI nokuzama ubhiya wethu, uVictor waneliseka ngokucubungula kwethu ubhiya kanye nobuchwepheshe.
Yize ukuthengiswa kukabhiya akukuhle ngenxa ye-coronavirus, ubhiya wobuciko osezingeni eliphakeme usengayithola imakethe yawo.
Lapho sifinyelela kuVictor ngocingo, uyakujabulela ukukhuluma ngophuzo, futhi uyakujabulela ukukhuluma ngekusasa likabhiya eRussia. Ingxoxo yethu, okwamanje, ifinyelela kubaba emuva kunezinyanga eziyishumi nambili emuva lapho uVictor aqala khona ukuxoxa nathi online. "Uma singangenisa ezinye izimpahla ezenziwe eChina, kungani singangenisa nobhiya waseChina?" Umbono kaVictor wokuzama ukungenisa ubhiya waseChina ekugcineni uwenza ugcwaliseke ngonyaka we-2020.
“Uma ngikhuluma iqiniso, sengizame cishe bonke ubhiya ngenkathi ngivakashele eChina”, kusho uVictor, “ekugcineni ngagcina nginoBlack Beauty. Kuyindaba engiyazisa kakhulu ngoba ngithola umlingani omuhle eChina ”.
Esinye isizathu sokuthi unamathele kuBuhle obuMnyama: wonke ama-hops nama-yeast esiwamukelisiwe athathwa eYurophu noma eMelika. Leyo yingxenye ebalulekile yokupheka ubhiya okuhle, ucabanga kanjalo. “Lowo ngomunye wemithombo engiyithanda kakhulu yebhizinisi lami likabhiya. Yinto engiyazisa kakhulu ”, ephinda uVictor.
I-Aluminium Can 355ml ejwayelekile, Sleek 310ml Aluminium Can, I-Aluminium Can 310ml Sleek, I-Aluminium Can 250ml Sleek, I-Aluminium Can 330ml ejwayelekile, Sleek 200ml Aluminium Can,